Ezinye iiprofayili zentsimbi abavelisi - China Ezinye iiprofayili zentsimbi abaXhasi kunye neFektri
Steel Round Bar Ukwenza Izixhobo
Ibha yentsimbi ejikelezileyo ibhekisa kwisinyithi esiqinileyo esinecandelo lesetyhula. Yahlulahlulwe ibe kaloliwe eshushu, nasekuqiniseni kunye nokuzoba ebandayo. Inkcazo yentsimbi eshushu eqengqelweyo ibar yi-5.5-250mm. Phakathi kwazo, i-5.5-25 mm encinci yentsimbi ejikelezayo ibha inikezelwa kakhulu kwiinyanda zemivalo ethe nkqo, edla ngokusetyenziswa njengeentsimbi, iibholiti kunye namalungu oomatshini ahlukeneyo; i-bar yentsimbi ejikelezayo inkulu kune-25mm ubukhulu becala isetyenziselwa ukuvelisa iindawo zoomatshini okanye i-tube engenanto engenanto engenanto.
Ibha yentsimbi yesikwere ibar eqinileyo. Ibha yentsimbi yesikwere inokwahlulwa ibe sisitovu eshushu kunye nokuqengqeleka okubandayo; Ubude eshushu liqengqiwe intsimbi yesikwere bar yi 5-250mm, kwaye oko ngesinyithi isikwere intsimbi ebandayo yi 3-100mm.
Ibha yentsimbi yesikwere ibizwa ngokuba yintsimbi yesikwere sebar yesinyithi, ibar yentsimbi yesikwere. Isetyenziswa ikakhulu ekwenziweni kwepetroleum, imichiza, ukwahlulwa kwegesi kunye nesikhongozeli sokuhambisa okanye ezinye izixhobo ezifanayo, ezinje ngazo zonke iintlobo zeenqanawa zenqaba, isinanisi sobushushu, itanki yokugcina kunye nemoto yetanki, njl.